बीमा – Page3– Banking Khabar
प्रभु इन्स्योरेन्स र नेपाल मेडिसिटी अस्पताल बीच नगदरहित सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता
बैंकिङ खबर । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपाल मेडिसिटी अस्पताल बीच नगदरहित सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको तर्फबाट महाप्रबन्धक विजय रिमाल र प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्यले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । …
बीमा शूल्क वापत निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले आर्जन गरे २२ अर्ब बढी
बैंकिङ खबर । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले असार मसान्तसम्ममा बीमा शुल्कवापत २२ अर्व ३५ करोड ७६ लाख १६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन्, जुन जेठ मसान्तको तुलनामा तीन अर्ब ४९ करोड ४१ लाख ९५ हजारले बढी हो । जसमध्ये, अग्नि बीमाबाट …
बैंकिङ खबर । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक लाख ३७ हजार १६ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले गत असार ८ गतेदेखि साउन १० गतेसम्म निष्काशन खुला गर्दा नबिकेको १५ हजार आठ सय ६१ कित्ता संस्थापक समूहको …
एक महिनामा जीवन बीमा कम्पनीका ४९ शाखा थपिए
बैंकिङ खबर । एक महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुका ४९ शाखा थपिएका छन् । संचालनमा रहेका १८ जीवन बीमा कम्पनीको शाखा संख्या गत असार मसान्तसम्मा एक हजार ३८ वटा पुगेको छ । जेठ मसान्तमा मुलुकभर जीवन बीमा कम्पनीका नौ सय ८९ …
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले माग्यो ३८ जना कर्मचारी
बैंकिङ खबर । सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले व्यवस्थापकदेखि सहायक स्तरको पदमा ३८ जनाका लागि जागिर खुलाएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ९औं तहदेखि ४औं तहको लागि खुला तथा समावेशी समुहमा पदपुर्ति गर्नका लागि कम्पनीले दरखास्त आह्वान गरेको …
संख्यात्मक वृद्धिले बीमाको प्रतिष्पर्धा बढाएको छ
नेपालमा बैंकिङ पहुँच ५० प्रतिशत जनतामा पुगिसक्दा बीमा पहुँच जम्मा १० प्रतिशत जनतामा मात्र सिमित रहेको छ । बीमा समितिले शाखा विस्तारको साथै पुँजी बृद्धिलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो योजनाहरु बनाउँदै आएको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिष्पर्धात्मक …
पुनर्बिमा कम्पनीले एक करोड ६० लाख कित्ता आईपिओ जारी गर्ने
बैंकिङ खबर । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर (आईपिओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा एक करोड ६० लाख कित्ता आईपिओ निष्काशन गर्न लागेको हो । सेयर निष्काशनका लागि …
बीमा अभिकर्ता बन्न कस्ता योग्यता चाहिन्छ ?
बैंकिङ खबर । बीमा कम्पनीको तर्फबाट तलबी कर्मचारीको रुपमा निश्चित कमिसनका आधारमा बिमकको तर्फबाट बिमित सक्षम गई प्रवद्र्धन कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बीमा अभिकर्ता भनिन्छ । बीमा अभिकर्ताको न्युनतम शैक्षिक योग्यता एसएलसी वा सो सरहको उतिर्ण गरेको हुनुपर्दछ । यस्ता व्यक्तिले …
एनआईसी एशिया बैंक र प्राइम लाईफ ईन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ ।सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार अब …
एनआईसी एशिया बैंक र रिलायन्स लाईफ ईन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएका बैंकको २३७ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न …
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले माग्यो डेढ सय बढी कर्मचारी
बैंकिङ खबर । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विभिन्न १२ पदका लागि १५२ जना कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले २७ जना शाखा प्रमुख माग गरेको छ । यसका लागि कम्तीमा स्नातक गरेको कर्मचारी मागेको छ । मार्केटिङमा स्नातकोत्तर गरि २ …
प्रभु इन्स्योरेन्स र ओम हस्पिटल बीच नगदरहित सम्झौता
बैंकिङ खबर । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर बिच नगद रहित (क्यसलेस) सेवा सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्य तथा ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको तर्फबाट …
बैंकिङ खबर । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । मेगा बैंकको प्रधान कार्यालयमा मेगा बैंककी सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआइसी)का कायममुकायम सिइओ अविजित घोष दस्टीदरले …
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्जन गर्यो झन्डै ४८ करोड मुनाफा
बैंकिङ खबर । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ४७ करोड ९२ लाख ५७ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण नगरिएको वित्तीय विवरण हो । अघिल्लो वर्ष लेखापरिक्षण हुनु …
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एसिया बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लि. तथा एन आईसी एसिया बैंक लि.बीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका नि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद लामिछाने र एनआईसी एसिया बैंक का नि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले हस्ताक्षर गरे …